Counter Character Online - Tir Calaamadaha | Abuurista khadka tooska ah
Counter Character Online - Tir Calaamadaha
Hubso in marar badan aad u baahatay tiri tirada jilayaasha ee qoraal gaar ah. Hadda waxaas oo dhan waa mid aad u fudud mahadsanid tan miiska dabeecada khadka tooska ah, taasna waxay kuu oggolaaneysaa inaad si deg deg ah oo fudud u tirin karto tirada jilayaasha ku jira qoraal kasta.
Qor qoraalka sanduuqa soo socda, dhagsii badhanka "Tir xarfaha" waana intaas. Ka fudud, macquul maaha.
Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale leenahay a ereyga miisaanka internetka taasi hubaal wax weyn ayey kuu tari doontaa.
1 Sidee ayuu uga shaqeeyaa miisaanka qadka internetka?
2 Waa maxay miiska dabeecadda?
Sidee ayuu uga shaqeeyaa miisaanka qadka internetka?
Ahaanshaha aalad onlayn ah, noo miiska dabeecada Uma baahna rakibid hore kombuyuutarkaaga ama mobiilkaaga, markaa waad u adeegsan kartaa isla markaaba markaad gasho boggan.
para ogow tirada jilayaasha qoraalkaagu ka kooban yahaySi fudud waa inaad gashaa waxyaabahaas sanduuqa kore, ugu dambaynna guji batoonka hoos ku xusan si aad u muujiso farriin jilayaasha la tiriyey
Ilbidhiqsiyo gudahood, waxaad kuheli doontaa natiijo sax ah astaamahan. Waa muhiim inaad taas ogaato meelaha sidoo kale waa la tiriyaa, laakiin haddii aad rabto inaan bilowno waxqabad aan xisaabtooda ku jirin, waan ku faraxsanahay haddii aad nala soo xiriirto si aan u awoodno inaan ku hirgelinno qaabkan cusub aaladda.
Waa maxay miiska dabeecadda?
Shaqooyinka qaarkood u baahan ugu yaraan jilayaal si loo qiimeeyo hawsha, markaa waxaa lagugula talinayaa inaad haysato qalab si aad si toos ah oo fudud ugu fuliso hawshan.
Mahadsanid miiska dabeecada Laga soo bilaabo Creativos Online, waxaad awoodi doontaa inaad yeelato tirooyinkan si aad u raaxo badan, maadaama si fudud adoo galaya qoraalka, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato wadarta astaamaha qoraalkaaga.
Laakiin ka waran haddii qalabku shaqeyn waayo? In kasta oo ay tahay inay sifiican u socoto, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa aaladaha sida Ereyga si aad u sameyso tirinta astaamaha: si tiri ereyada, waxaa lagaa doonayaa oo kaliya inaad doorato qeybta qoraalka aad rabto inaad tiriso, oo aad gujiso Dib u eegid> Tirinta Erayga> Calaamadaha.
Sidaad u aragto, waa hawl xoogaa dhib badan maadaama aad u baahan tahay inaad samayso dhowr guji, markaa waxaan kugula talineynaa inaad marwalba aado degelkan, maaddaama adigoo gujinaya sahlan waxaad heli doontaa waxaad rabto.
Waxaan rajeyneynaa in qalabkan khadka tooska ah ee tirinta jilayaasha ay kuu anfici doonaan.